अनमोलको गल फ्रेन्ड हुन चाहिन्छ यस्तो गुण ( भिडियो ) – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsKollywoodअनमोलको गल फ्रेन्ड हुन चाहिन्छ यस्तो गुण ( भिडियो )
February 24, 2019 Tulasa Karki Kollywood, News, Video 0
निकै प्रतिक्षित मानिएको चर्चित कलाकार अनमोल केसीको मुख्य अभिनय रहेको फिल्म ‘क्याप्टेन’ को गीतसंगै ट्रेलर केहि दिन अगाडी सार्वजनिक संगै फिल्मको चर्चा दिनदिनै चुलिदै गहिरहेको छ ।
प्रर्दशन मिती नजिकिदै गर्दा फिल्म निर्माण टिम अहिले विभिन्न किसिमको प्रचारप्रसार विधि लगात विभिन्न अन्तरवार्ता ब्यस्त हुन थालेको छ । यसैबीचमा फिल्मका मुख्य पात्र अनोलले सुत्र इन्टरटेन्मेन्टबाट डाइरेक्ट उनका फ्यान तथा दर्शक माझ जोडिएका छन् ।
उनलाई उनका फ्यान/फ्लोव्सहरुले फिल्म,उनको रिल नभएर रियल लाइफसंग सम्बन्धित प्रश्नहरु सोदेका थिए । जसको उनले निकै गहकिलो जवाफ समेत दिएका छन् ।
उनलाई एक युवतीले ‘नमोल तपाई फिल्म पैसाको लागि गर्नु हुन्छ या दर्शकको लागि गर्नु हुन्छ । यदि दर्शकको लागि गर्नु हुन्छ भने किन अनोलले यति पैसा पाइन् भने फिल्म गर्दैन भनेर विभिन्न किसिमका समाचारहरु आउछन त ? भनेर प्रश्न गरेकी थिन । जसको जवाफ दिदै उनले आफ्नो स्टाडमका लागि पनि पैसा आवश्क छ । तर मेरो लागि पैसा भन्दा पनि दर्शक आवश्क हुनु हुन्छ । किन भने पैसा सधै रहदैन तर दर्शक फ्यान भने सदाको लागि रहन्छ । भोलि म नरहे पनि दर्शकले भने सधै याद गर्ने छन् भनेका छन् ।’
त्यस्तै उनलाई कस्तो खाल्को गल फ्रेन्ड चाहिन्छ ? आमाको याद आउछ कि आउदैन लगाएतक प्रश्न गरेका थिए । जसको उनले निकै मिठो जवाफ समेत दिएका थिए ।